Garee cimaa torban kanaa keessatti Smalling, Pogba, De Bruyne, Sanchez, Salah ni argamu - BBC News Afaan Oromoo
Garee cimaa torban kanaa keessatti Smalling, Pogba, De Bruyne, Sanchez, Salah ni argamu
Gareen Cheelsii Southhampton mo'achuun xumura waancaa FA'f ga'eera, Tottenham kan mo'ate Manchister waliinis ni morkata.
Piriimiyer Liigiidhaan Liiverpuulii fi West Brom 2 walqixa yoo xumuran,Watford fi Kiristaal paalaas goolii malee xumuran.
Maanchistar Siitiin Suwaansii 5 fi o dhaan, Arsenaal Weestihaamiin 4 fi 1n akkasumas Istookii fi Burnleyn 1 walqixa xumuraniiru.
Garuu kan ga'umsa gaarii agarsiise eenyu laata? Kan Gaarzi Kiruuksi dubbisiitii keetiin walbira qabi.
Goodayyaa suuraa Garee cimaa torbanii Gaarzi Kiruuksi:: Wayne Hennessy, Cesar Azpilecueta, Chris Smalling, Nacho Monreal, Ander Herrera, Kevin de Bruyne, Paul Pogba, Alexis Sanchez, Mohamed Salah, Salomon Rondon, Danny Ings
Karra eegaa - Wayne Hennessey (Kiristaal Paalaas)
Goodayyaa suuraa Wayne Hennessey
Hennessey maniiwwan shan qolachuudhaan taphoota piriimiyer liigii 12 keessatti abdii kutannaa kilabichaa isa lammaffaa jalaa baraareera.
Ittisaa - Cesar Azpilicueta (Chelsea), Chris Smalling (Manchester United), Nacho Monreal (Arsenal)
Cesar Azpilicueta: Cheelsiin keessattuu Antonio Conte Waancaa FA xumuraaf ga'uuf hoji manee guddaatu eeggata.
Yeroo darbe sababa marraagummaa isaaniif jecha qabxii gatan ,kun gaaga'ama kufaatiif isaan saaxileera.
Nuusa xumuraarratti haala gadi bu'aadhaan Saawuuz Haampitan mo'atan ,mo'iinsi suniyyuu miira kaka'umsaa Cesar Azpilicueta agarsiiseeni.
Deggersi Azpilicueta torban wayitii kanaa hunduu Alvora Morataf akka ta'e beektuuree?
Chris Smalling: Garez Southgate wayita taphoota obbolummaa Ingilaandi Nezerlaandis fi Italii waliin Bitootessa keessa taphatan Chris Smalling gatee deeme, garuu akka yaada hooggantichaatti deebi'uu qaba. Smalling dandeettii barbaadamu qabaachuu dhiisuu mala, garuu Piriimiyer Liigii keessatti dorgomaa hin qabu. Ingilaandonni sarara Ittisaarraa taphataa Smalling dhiisuuf hin carroomne.
Tapha Maanchister Yuunaayitid Spuriin 2 fi 1n mo'aterratti Smalling si'a afur haala mijeessee, si'a sadimmoo ittisuun taphataa sarara ittisaa cimaa ta'eera.
Nacho Monreal: Taphoota Piriimiyer Liigii torba darbanirratti gooliiwwan torba galcheera.
Sarara gidduu- Ander Herrera (Manchester United), Kevin de Bruyne (Manchester City), Paul Pogba (Manchester United), Alexis Sanchez (Manchester United)
Ander Herrera: Taphataan kun akka nama aarsu argeera. Kan dhadhaan afaansaa keessatti hin baqne,yoo qomeekee gototuu baatellee, namarra ejjeta, yoo namni xiqqooshee tuqemmoo akka waan haleelameetti iyya. Tapha waancaa xumura FA Spurs waliin taphatan irratti kana hunda agarsiiseera. Jalqabarratti Mousa Dembele waliin of eeggannoo taasisaa ture, sanaan booda saaxilameera.
Bakka hundatti waan mullachuu qabu itti fakkaata. Kun kan Joosee Moriinihoon mo'iinsa tapha xiinsammuu jedhaniin.
Harreran taphoota Waancaa FA lamaan darban irratti gooliigalcheera,taphoota 15 taphaterrattimmoo si'a lama qofa hokkara kaase.
Kevin de Bruyne: Taphataan kun tapha piriimiyer liigii baranaarratti goolii shan galchuun taphattoota hedduu caaleera.
Paul Pogba: Poogbaan yeroo tapha eegalu taphataa amala badaa hin turre. Miirri isaas akkuma taphi ho'aa deemuun gaarii ta'aa dhufeera. Marroo kanaan kubbaa si'a 12 midhaassee dabarseera, kunimmoo raawwiisaa kan bara darbee dachaa lama ta'a.
Alexis Sanchez: Tapha gurguddaa keessatti carraa bahee mullachuu qaba. Taphoota Kilabaa fi biyyaaf Wembley taphate , kan FA ja'a dabalatee, goolii saddeet galcheera.
Taphatoota fuulduraa - Mohaammed Saalaah (Liiverpuul), Salomon Rondon (West Broom), Daanii Iingis (Liiveruul)
Mohaammed Saalaah: Akkamittiin bara dorgommii tokkotti galchiiwwan 41 lakkoofsifta? Kuni galchii kilebootni Piriimerliigii tokko tokko lakkoofsisanii ol tahuu danda'a.
galchiin mohaammad saalaa Westi Biroom irraatti lakkoofsise galchii bareedduu gara biraa karra eegaa cimaa Ben Fooster irratti lakkoofsifamtedha. Haa tahu malee leenjisaa Yargen Kiloop,sochiin Westi Biroom boqonnaa duraa galchii lamaa wal qixaan akka xumuru taasisera jedha.
Kana beektaa? Saalaan galchiiiwwan 31 primirliigii irraatti bara kana qofa lakkoofsise. Galchii taphatootni akka Alan Shiirer Bilaak Baarniif bara 1995-1996ti lakkoofsise,Kiristaanoo Roonaaldoo,Maanchister Yuunaayitidiif bara2007-2008,Luwis Suwaarez Liiverpuuliif bara 2013-2014 taphoota 38 irratti lakkoofsisaniin wal qixa
Salomon Rondon:Salamoon Rondon tapha piriimerliigiif gahaa miti kanaafi kan Westi Biroom kufaa jiru jechaan ture.Akkas jedhee kanaafan dadhabbiisaa ammaa ilaalee Aleksaander Laakaazet galchii lama lakkoofsise irra Rondon torbee kana filadhe.Taphataan internaashinaalaa Venezuweelaa,galchii hawwatuu taate Liiverpuul ija toko dorgommii shaampiyoonsiliigii irra godhatee taphatu irratti lakkofsise.Warri didiimon jijjiiraa taphatootaa shan taasisanii sochii gaarii hin agarsiifne.Kiloop wal qixa xumuruusaanii maal gochuu danda'u.wow.
Rondon:Taphoota Piriimeliigii jaha irratti Taphatee galchiiwwan shan irrati kallattiin hirmaatera.[galchiiwwan sadii fi kubba lama mijeessee kenneera.]
Daanii Iingis:Hidhannoo Liiverpuuliin Daanii Iingis deebinee arguun gaarii ture.Miidhama waggota lamaa irraa bayyaanataa turee, gareensaa galchii jalqabaan akka dursu taasisera. maaliif Kiloop deebisee taphataa sarara duraa kana baase? kana hin beeku.Iingis yeroo taphaa barbaadee ture. Taphata sarara ittisaa Westi Biroom Ahimed Heegazii fiigsaa ture. Yeroo inni bahu Heegaaziin gammaduu hin hafne.Yeroo sana jalqabee taphni Liiverpuul gadi bu'aa dhufe
Kana beektaa: Daanii Iingis guyyoota 930 booda galchii jalqabaasaa lakkoofsise.Erga Everteen irratti bara 2015 lakkoofsise kun kan jalqabaati.
Dhimmoota xiyyeeffannoo kirooksi
Guyaa xumuraatti ibsuuf dirqameera. Arseen Weenger yeroo waancaa FA yeroo sadaffaf mo'ate gadhiisuu qaba ture.Garuu akkuma warra kaanii waamicha xumuraa eeggataa turan.
yeroon kun tibba Wenger hirmaannaa shaampiyoonsiliigii keessaa bahuusaa itti mirkaneesse dha. Waliitii aansuun shaampiyoonsi liigii ala tahuusaati.Carraan qabu waancaa Awurooppaa Liigii mo'achuu qofadha.
Arsenaaliin gadhiisuunsaa warra kaaniif akka muuziqaa kaaniif ammoo naasuu guddaa ture.Eenyu kilebicha leenjisa kan jedhuufis karaa banaa adeema. Weenger nama yeroo hundumaa galateeffamuu fi yaadatamu qabu dha
Ijoolle xixiqoo tasa hin beekamne kan akka Nikoolaas Aneelkaa fi Paatiriis Veeraa fa'a fidee eenyutu taphatoota ciccimoo akasii gochuu dandaha? Weenger tapha Arseenal baayee jibisiisaa ture, bara Joorji Giraam akka tapha kubba Biriteenitti bareechuun hawwataa taasisera. Teerii Heenerii fidee taphataa cimaa sarara duraa adunyaa taasiseera. Taphoota piriimerliigii bara tokkoo osoo hin mo'amiin xumure. kun sadarkaa leenjistoota Jook Isteen,Biriyaan Kiloo,Biil Shaankilii fi Aleeksi Fergusen isa taasisa
'Magaalaa Finfinnee itti gammadee, itti booneen tajaajila'